Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Raharaha Razaimamonjy Claudine: Noterena hitory an’ireo mpitsara ny minisitry ny Fahasalamana ?
Ireo tsy maty voalavo an-kibo ao anatin’ny fitondrana ka mitady ny irika rehetra hanavotana an’i Claudine Razaimamonjy mba tsy hahavoatonona ny anarany avy ho isan’ny mpitsikombakomba na tompon-keloka mihitsy amin’ny raharaha anenjehan’ny fitsarana an-dRazaimamonjy Claudine, dia mitady ny fomba rehetra hikapana koa ny ranjo na ny lohan’izay mitady ho « be loha ».
Ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara (Smm), Rtoa Faniry Ernaivo sy ny lehiben’ny fampanoavana ambony, Randrianasolo Jacques no voalohany itadiavan’ny Hvm irika mba holemana.
Ny minisitry ny Fahasalamana izany no noterena omaly, raha ny akom-baovao re, mba hanainga ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), mba hitory an’ireo mpitsara roa miseho ka ny Filankevitra ambonin’ny fitsarana (Csm) no asaina mivory tsy ara-potoana haingana mba handray fanapahan-kevitra momba azy ireo. Ny dingana voalohany tetehina amin’izany dia ny hanaisorana azy ireo amin’ny andraikiny ankehitriny mba hanamorana ny fampiharana ny tetika rehetra hanadiovana an-dRazaimamonjy Claudine.
Manara-maso ny momba izany isika.